Madaxweyne Cabdi Iley oo kiiskiisa loo gudbinayo maxkamada denbiyada dagaalka iyo interpol | Saraarnews
Sweden(saraarnews) Telefishanka wadanka sweden SVT ayaa laga sii daayey muuqaalo naxdin leh oo ku saabsan Tacadiga loo geystay dadka Soomaalida ah ee ku dhaqan Somali galbeed.
Muuqaaladan oo uu ka muuqanayo Madaxweynaha Kililka 5’aad ee Soomalidu degto iyo askartiisa oo Nin meyd ah Madaxa Cagta ka saaraya, ayaa ummadii daawatay yaxyax iyo Argagax ka qaadeen. Waxyaabaha ka sii daran waxaa ka mida markuu Meydka madaxa iskaga Taago ayuu aflagaadaynaa Diinteena wanaagsan wuxuuna odhanayaa “diinta aabahaa ….” Arintaasi waxay ku tusaysaa siduu diinta uga aradan yahay.
Muuqaalada qaar cabdi illey wuxuu codsanayaa in sawiro lagaga qaado guryaha dadkii lahaa la gubay iyagiina la laayey.
Muuqaalka halkaas laga siidaayey waxaa ka marqaati kacay Haweenayda la yidhaaho Laetitia Bader oo ka tirsan Madaxda Hay’ada xuquuqda aadamaha u dooda Human Rights Watch oo saldhigeedu yahay Itoobiya.
Haweenaydaas ayaa si faahfaahsan uga warantay xasuuqii ciidamada Cabdi illey ka geeysteen degaamada gaashaamo iyo Sadex Tuulo oo ay ka mid yihiin Raqda iyo Cadaada.
Waxa kale oo muuqalada lagu soo bandhigay Maamulihii Mareegta Cakaaranews.com Abdullahi Hussein oo ku hadli jiray Afka Cabdi Maxamuud cumar (cabdi Iley) oo ku marqaati furaya dhacdo layaab leh oo lagula kacay oday Ogaadeena oo codsaday in laga qaado ciidamada Liyuu Booliska loo yaqaano oo ay u badan dibjirkii magaalooyinka iyo Kooxihii ONLF laga soo xereeyey.
Muuqaalka waxaa kale oo ka muuqanaya Filinkii been abuurka ahaa ee laga sameeyey labadii weriye ee u dhashay wadanka SWEDEN.
Dad xogogaal ah oo aanu la xidhiidhnay waxay noo sheegeen in la dhameeyey dacwad ka dhana oo Cabdi Illey loo gudbinayo Booliska caalamka iyo Maxkamada denbiyada ee Dunida , lana doonayo in la qabto marka ugu horaysa ee ay suuragasho. halkan hoose ka daawo warkaas ku saabsan xasuuqa iyo markhaatiyada cabdi illey lagu soo oogay qaar ka mid ah.
Dhinaca kale warar la xaqiijiyey ayaa sheegaya in dhowaan dawlada Itoobiya Xabsiga u taxaabi doonto cabdi cumar Illey marka uu soo dhamaado baadhitaan loo diray gudi madaxbanaan oo gacanta ku haya filimkii been abuurka ahaa ee lagu qabtay labadii weriye ee Martin Schibbye and Johan Persson ee Sweden u dhashay, Filinkaas oo ceeb dublamaasiyadeed u soo hooyey dalka itoobiya sababteedana uu lahaa Cabdi maxamuud cumar “Cabdi illey”.
Fillinkaas been abuurka ah halkan ka daawo sida loo metelay.
Buuga suugaanta Mubarak qoorubaxay (draft)